COVID-19 ကပ်ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေ အလျှင်အမြန် တိုးတက်မှုရှိလာတာ အတွက် ဂုဏ်ပြုချီးကြူးကြောင်းနဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးက သုံးစွဲနိုင်အောင် လုပ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း WHO နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်တဲ သောကြာနေ့မှာ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
"ဒီသီတင်းပတ်ထဲမှာ COVID- 19 ကာကွယ်ဆေးအတွက် လူတွေမှာ စမ်းသပ်မှု ကနဦးရလဒ်တွေ ထွက်လာတာကို အားပေး ကြိုဆိုကြောင်း နဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အထူးအရေးပါတဲ့ လက်နက် တခုဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာ မလိုဘူးလို့ ပြောသွားတာပါ။
နယူးရောက် အခြေစိုက် အမေရိကန်ဆေးကုမ္ပဏီ Pfizer နဲ့ ဂျာမဏီက BioNTech တို့ ပူးတွဲ စမ်းသပ်နေတဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးဟာ စမ်းသပ်မှု နောက်ဆုံး အဆင့် ဖြစ်တဲ့ Stage3မှာ လူပေါင်း ၄၀ ၀၀၀. ကျော်နဲ့စမ်းသပ်ရာမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၉ ၀ ထိရောက်မှု ရှိတာတွေ့ရတယ်လို့ တနင်္လာနေ့က ကြေညာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါ တရုတ်နိုင်ငံမှာ စတင်ခဲ့ချိန်ကစပြီး တနှစ်တောင် မပြည့်သေးခင်မှာ
အခုလို ကာကွယ်ဆေးထုတ် နိုင်မယ့် အနေထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလောကမှာ အခုလို ကာကွယ်ဆေးတမျိုးကို အမြန်ထုတ်ဖို့လုပ်နိုင်တာ တခါမှ မရှိသေးဘူး လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အခုလို သိပ္ပံဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှု အတွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး အကျိုးခံစားရအောင် သေသေချာချာ လုပ်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲက ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဟာ အခုအခါ ကမ္ဘာတလွှား လူပေါင်း ၁.၃ သန်းနီးပါးကိုသေဆုံး စေခဲ့သလို ဒီရောဂါအကူးစက်ခံရသူ ကလည်း ၅၂.၇ သန်းကျော် နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
COVID ကာကှယျဆေး တကမ်ဘာလုံးရရှိစဖေို့ WHO အကွီးအကဲ တောငျးဆို
COVID-19 ကပျရောဂါအတှကျ ကာကှယျဆေး ထုတျဖို့ကွိုးစားမှုတှေ အလြှငျအမွနျ တိုးတကျမှုရှိလာတာ အတှကျ ဂုဏျပွုခြီးကွူးကွောငျးနဲ့ ဒီကာကှယျဆေးကို ကမ်ဘာ့နိုငျငံအားလုံးက သုံးစှဲနိုငျအောငျ လုပျရမှာ ဖွဈကွောငျး WHO နှဈပတျလညျ ညီလာခံ နောကျဆုံးနဖွေ့ဈတဲ သောကွာနမှေ့ာ WHO အကွီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus က ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
"ဒီသီတငျးပတျထဲမှာ COVID- 19 ကာကှယျဆေးအတှကျ လူတှမှော စမျးသပျမှု ကနဦးရလဒျတှေ ထှကျလာတာကို အားပေး ကွိုဆိုကွောငျး နဲ့ ဒီကာကှယျဆေးဟာ ကပျရောဂါ ထိနျးခြုပျရေးအတှကျ အထူးအရေးပါတဲ့ လကျနကျ တခုဆိုတာ သံသယဖွဈစရာ မလိုဘူးလို့ ပွောသှားတာပါ။
နယူးရောကျ အခွစေိုကျ အမရေိကနျဆေးကုမ်ပဏီ Pfizer နဲ့ ဂြာမဏီက BioNTech တို့ ပူးတှဲ စမျးသပျနတေဲ့ Covid-19 ကာကှယျဆေးဟာ စမျးသပျမှု နောကျဆုံး အဆငျ့ ဖွဈတဲ့ Stage3မှာ လူပေါငျး ၄၀ ၀၀၀. ကြျောနဲ့စမျးသပျရာမှာ ရာခိုငျနှုနျး ၉ ၀ ထိရောကျမှု ရှိတာတှရေ့တယျလို့ တနင်ျလာနကေ့ ကွညောခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီရောဂါ တရုတျနိုငျငံမှာ စတငျခဲ့ခြိနျကစပွီး တနှဈတောငျ မပွညျ့သေးခငျမှာ
အခုလို ကာကှယျဆေးထုတျ နိုငျမယျ့ အနထေားလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဆေးလောကမှာ အခုလို ကာကှယျဆေးတမြိုးကို အမွနျထုတျဖို့လုပျနိုငျတာ တခါမှ မရှိသေးဘူး လို့လညျး ပွောပါတယျ။ အခုလို သိပ်ပံဆိုငျရာ အောငျမွငျမှု အတှကျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအားလုံး အကြိုးခံစားရအောငျ သသေခြောခြာ လုပျရမှာ ဖွဈကွောငျးလညျး WHO ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ အကွီးအကဲက ပွောပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါဟာ အခုအခါ ကမ်ဘာတလှား လူပေါငျး ၁.၃ သနျးနီးပါးကိုသဆေုံး စခေဲ့သလို ဒီရောဂါအကူးစကျခံရသူ ကလညျး ၅၂.၇ သနျးကြျော နပွေီဖွဈပါတယျ။
မြန်မာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူ ၆၅,၅၉၈၊ သေဆုံးသူ ၁,၅၀၈